Ciidamada Puntland oo gacanta ku dhigay lacag been abuur ah (Feelso) – STAR FM SOMALIA
Ciidamada Puntland oo gacanta ku dhigay lacag been abuur ah (Feelso)
Ciidamada Booliska Gobalka Bari ayaa Maanta howlgalo ay sameeyeen ku guleystay in ay qabtaan lacago Faalso ah oo iskugu jirtay Doolar iyo EURO oo la donaayayain si qarsoodi ah loo galiyo Magaalada Bosaaso taas oo lagu qabtay Koontoroolka Magaalada.
madaxweenaha maamulka galmudug oo Muqdisho soo gaaray iyo u jeedka safarkiisa
Madaxweyne maamulka Hirshabeele oo soo saaray Liiska Musharaxiinta Aqalka Sare
Beesha Caalamka ayaa aad uga walaacsan khilaafka u dhaxeeya Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo & Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Maxamed Xuseen Rooble, kaas oo saameeyay Hay’adaha kala duwan ee dowladda.
Wakiilada Beesha Caalamka ayaa tiro laba jeer ah waxaa ay soo saareen qoraalo ay uga dalbanayeen Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Rooble in ay khilaafka xaliyaan si uusan saameyn ugu yeelan howlaha doorashooyinka ee socda.
Xogaha la helayo ayaa waxaa ay sheegayaan in Wakiilada Beesha Caalamka ee ku sugan Xerada Xalane ay cadaadis xoogan saarayaan Madaxda is khilaafsan ee dowladda, iyaga oo ka dalbanayay inay wax walba wada-hadal ku dhameeyaan.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku dsrayaan in Bessha Caalmaka ay u soo jeediyeen Farmaajo iyo Rooble inay joojiyaan qoraalada sii hurinaya qoraalkooda, si uusan u sii xoogeysay.
Khilaafka u dhaxeeya Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo & Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda ayaa weli taagan, waxaana dhawaan fashilmay dadaalo xal raadin ah oo ay sameeyeen Madaxweynayaasha Galmudug iyo Koonfur Galbeed.
Wararka6 seconds ago